Cathy Nicholas December 16, 2012 at 12:32 AM
သူမှ ကိုယ့်ကိုမချစ်တာ အစ်ကိုသက်တန့်ရယ်။ အဝေးက ကြည့်ပီး သူမသိအောင် ကူညီနေရုံပဲတတ်နိုင်တာပါ။ အနားမှာထား ပီး အချစ်တေနဲ့ ထွေးပွေ့ဖို့ထက် သူမမြင်အောင် ခိုးပီးချစ်နေရတာပါ။
အန်တီရှိန် December 16, 2012 at 12:28 PM
သူကြောင့်မျက်ရည် ခဏခဏ ကျရတယ်ဆိုရင်ရော. .ဆရာသက်တန့်. . .:(